Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan oo baahisay tirakoobka howlgalladii ka dhacay dalkaas labadii bilood ee lasoo dhaafay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan oo baahisay tirakoobka howlgalladii ka dhacay dalkaas labadii bilood ee lasoo dhaafay.
On Oct 11, 2018 217 0
Lajnada Warfaafinta Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa baahisay tirakoobka rasmiga ee howlgallada ay Mujaahidiintu ka fuliyeen wadanka Afqaanistaan bilihii Augosto iyo Septembar ee lasoo dhaafay.
Guud ahaan tirada howlgallada waxay gaarayaan 2031 howlgal, mid kamid ahna waa camaliyad istish-haadi ah, waxaana camaliyaadkaas ay ka dheceen guud ahaan gobollada wadankaas ee ay ku suganyihiin Shisheeyaha iyo ciidamada xukuumadda Kaabul.
Marka laga hadlo khasaaraha gaaray ciidamada Shisheeye, waxaa labadaas bilood laga dilay ugu yaraan 36 askari, halka laga dhaawacay 21 kale, waxaana xusid mudan in inta ugu badan ciidamadaas ay ahaayeen kuwa Maraykanka.
Khasaaraha gaaray malleeshiyaadka xukuumadda Kaabul ee lagu sheegay tirakoobka waxay gaarayaan dhimashada 4249 askari, halka ay ku dhaawacmeen 2800 oo askari.
Ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan waxay dhulka soo dhigeen lix diyaaradood oo 4 kamid ah yihiin hellecopter, halka labada kalana ay yihiin kuwa duuliye la’aanta ah ee loo yaqaano dronesta.
Waxaa sidoo kale labadaas bilood ay ciidamada Imaaradu gubeen 759 gaari oo nooocyada gaashaman ah, halka ay gacanta ku dhigeen oo ay qaniimeysteen 338 gaari.
Marka laga hadlo ciidamada Towbad keenayaasha oo mudooyinkii ugu dambeeyay soo kordhayay, waxaa Augosto iyo Septembar Mujaahidiinta isku soo dhiibay 1697 askari, sida lagu sheegay tirakoobka ay soo saartay Lajnada warfaafinta ee Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan.
Howlgalka Al-khandaq oo gugii lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay golaha shuurada ee Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa si firfircoon uga socda guud ahaan gobollada wadanka Afqaanistaan, waxaana maalin weliba dhaca tobanaan howlgal oo lagu dhiig bixinayo Shisheeyaha iyo kuwa kabaqaadka u ah.
Saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhacay dhowr gobol oo dhaca wadanka Afqaanistaan waxaa lagu dilay kudhawaad toban askari oo katirsan xukuumadda Kaabul, kadib markii ay weerar kala kulmeen dhanka Mujaahidiinta.